Fertilization Get လုပ်နည်း | ပို့ခြင်း | မြေသြဇာကောင်းသောကာလ | သန္ဓေသားစောင်ရေ | WikiWon
Fertilization Get လုပ်နည်း | ပို့ခြင်း | မြေသြဇာကောင်းသောကာလ | သန္ဓေသားစောင်ရေ
mujeer မတ်လ 10, 2017 29 မှတ်ချက်များ
Fertilization occurs when the head ofasperm penetratesamature ovum. ထိုးဖောက်မှုပြီးနောက်, အဆိုပါအရေးပါ (သောမျိုးဗီဇပစ္စည်းဆံ့) ယင်းသုက်ပိုးနှင့် Ovum ဖျူးနှင့်ပိတ်သုက်ပိုးတစ်စက်၏ကိုယ်နှင့်အမြီး၏. The newly fertilized ovum cal
ledazygote then forms an outer layer that is impenetrable to other sperm. က Fallopian tube ကိုနှိမ့်ချဖြတ်သန်းအဖြစ် Zygote ထပ်ခါတလဲလဲဆဲလ်ကွဲပြားခြင်းခြင်းကိုသည်းခံ. အချိန်ကိုကသားအိမ်ရောက်ရှိ, it has grown intoasolid ball of cells calledamorula. It then develops an inner cavity withasmall cluster of cells to one side, this is calledablastocyst. The blastocyst implants in the wall of the uterus, at this point it is known as an embryo.
ကျန်းမာရေး	describe the process of fertilization, fertilization and implantation, fertilization in humans, fertilization in plants, fertilization meaning, fertilization symptoms, fertilization video, how long does fertilization take	bookmark
ယခင်အပိုဒ် ပေါငျရိုး | ပေါငျရိုး, ကျိုးပဲ့ခြင်း | ပေါငျရိုးလည်ပင်းကျိုး | ပေါငျရိုး Shaft ၏ကျိုး
next ကိုပုဒ်မ How to CreateaNavigation Menu in WordPress
Veera မတ်လ 10, 2017 / 11:05 နံနက်
charles မတ်လ 10, 2017 / 11:34 နံနက်
mujeer မတ်လ 10, 2017 / 4:34 ညနေ
ELLIOT HAMMOND မတ်လ 10, 2017 / 2:27 ညနေ
mujeer မတ်လ 10, 2017 / 4:31 ညနေ